China Steel furemu maitiro-tikaisa dzichiumbwa muchina vagadziri uye bhizimisi | Zhongtuo
Steel furemu maitiro-tikaisa dzichiumbwa muchina Steel furemu hurongwa? Ngatitangei pfupi pakatanga simbi pepuranga hurongwa. Main rinopfungaira Anoumba mumwe simbi pepuranga hurongwa. Steel simbi kwava rokuti kugadzira nokuda kambani, rinokosha mutsetse rwakapetwa Anoumba, tiri Virtual vanoteerera akakwanisa kusika mupumburu Anoumba mutsetse zvinogona ajairane makambani zvinodiwa uye zvinoenderana nezvaunoda. chiine yedu kuchaita kudzidzisa vashandi kuderedza kuziva chirongwa chako kupedzisa pane nokuderedza scra ...
Steel furemu hurongwa ?
Ngatitangei pfupi pakatanga simbi pepuranga hurongwa. Main rinopfungaira Anoumba mumwe simbi pepuranga hurongwa. Steel simbi kwava rokuti kugadzira nokuda kambani, rinokosha mutsetse rwakapetwa Anoumba, tiri Virtual vanoteerera akakwanisa kusika mupumburu Anoumba mutsetse zvinogona ajairane makambani zvinodiwa uye zvinoenderana nezvaunoda. chiine yedu kuchaita kudzidzisa vashandi kuderedza kuziva chirongwa chako kupedzisa pane nokuderedza chinyorwa uye kushanda zvakanaka kuwedzera mhando. Mangoti kutsanya tinotora zvinodiwa uye nokuponesa kwenyu nguva boka uye mari. Tora Miratorato wako nezve kuziva chii chingaitwe nokukanda dzichiumbwa muchina.
Pakazosvika Miratorato, ngatirambei tarisa sei tikaisa nokuumba mabasa :
Uye achiumburuka dzichiumbwa muchina ichiita mbiri mhando rollers: chinjikira chinotenderera uye hunyambiri rollers. Zvinotevera mufananidzo anoratidza chinjikira rollers kushanda kwacho huru rinopfungaira Anoumba muchina.
Somuenzaniso: C purline muchina, kana mhete uye njanji muchina, kazhinji chete shandisa chinjikira rollers uye ipapo vanogona kupedza rinopfungaira muitiro.
Mira rollers :
Vertical rollers anowanzoita kuti kuoma Profiles akafanana simbi mutopota kugadzira muchina, vakarurama Rack kuita muchina uye nevamwe. Miratorato kuratidza kutwasuka rollers kushanda kwacho;
Somuenzaniso hafu kumativi munoyerera muchina anoshandisa zvakawanda vanopfuura dzaibva kumusoro rollers:
In shoko achifinyamisa achiumba muchina ndiyo tolls kuti achinje simbi ubvise kuti aida Profile:
Munyaya ino, chete kuratidza dzimwe pfungwa huru rinopfungaira Anoumba muchina, muna dzinotevera, tinotaura zvakawanda pamusoro Steel furemu maitiro-zvakawanda tikaisa dzichiumbwa muchina.
Previous: Container imba pani Mbiru rinopfungaira muchina simba shanduro kune ukobvu Max 4.0mm
Next: Fully kwangoitwa Heavy basa purline muchina stacker nokuda puline ukobvu pamusoro 3.0mm
C60-300 Fully Automatic Adjustable C Purline Fo ...
Stud Track Machine, Step Tile Ndakasarudza Machine , Hg50 Tube Line , Rolling Shutter Door Roll Achigadzira Kuita Machinery , Metal Deck Achigadzira Machinery , akaturika Sheet Tile Kuita Machine ,